रेस्टुरेन्टहरूको साथ ईकामर्समा ब्रेकिंग Martech Zone
शुक्रबार, अगस्त 10, 2007 बुधबार, नोभेम्बर 30, 2011 Douglas Karr
यस हप्ता मेरो लागि टेक्नोलोजी निर्देशकको रूपमा पहिलो हप्ता थियो संरक्षक। एक युवा टेक्नोलोजी कम्पनी, संरक्षकले पहिले नै अनलाइन अर्डरिंग उद्योगमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।
धेरै अन्य कम्पनीहरूको विपरीत, संरक्षकले उनीहरूको सफ्टवेयरलाई प्रयोगकर्ता अनुभव र एकीकरणमा केन्द्रित गरेका छन्। खरीददारको लागि सफ्टवेयर सिर्जना गर्नुको सट्टा, तिनीहरू प्रयोगकर्ताका लागि सफ्टवेयर विकास गर्नमा ध्यान दिइरहेका छन्।
कम्पनीले दुबै विकास र टेक्नोलोजीमा अविश्वसनीय काम गरेको छ कि उनीहरूसँग वास्तवमा एक टेक्नोलोजी गुरूसँग छैन जुन एप्लिकेसनको स्वामित्वमा छ। मैले आज सीईओ मार्क गाल्लोसँग कुरा गरें र म कत्ति प्रभावित भएँ भनेर अभिव्यक्त गर्न सक्दिन।
कम्पनी फुर्तिलो भएको छ, चाँडै उनीहरूको व्यवसायलाई त्यस्ता क्षेत्रमा समायोजन गर्दछ जहाँ रेस्टोरर्सलाई उनीहरूलाई अधिक चाहिन्छ। त्यहाँको टीम अविश्वसनीय छ। तिनीहरूको उद्योगको ज्ञान भनेको के हो जसले सबै चीज काम गर्दछ र के राम्रो कम्पनीको निर्माण गर्दछ।
रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई हेरेर तपाई सोच्नुहोला कि म यस गिगमा हामफाल्छु। आधा सबै रेस्टुरेन्टहरू असफल हुन्छन् र औसत मार्केटमा नाफाको सीमा हुँदैन, पारिवारिक रेस्टुरेन्ट क्रूर छ। एक सफल रेस्टुरेन्ट र एक असफल भोजनालय बीचको भिन्नता कपाल जत्तिकै पातलो हुन सक्छ… जुन पेट्रोनपाठ भित्र आउँदछ। रेस्टुरामा अनलाइन अर्डर थप्ने र / वा डेलिभरीको लागि जोड दिनु भनेको उद्योगलाई अहिले अगाडि बढिरहेको छ।
यहाँ किन अनलाइन अर्डरहरूले फरक पार्दछ:
व्यक्तिले अधिक खानाको अर्डर गर्दछन् जब उनीहरूले टेक-आउट र वितरणको अर्डर गर्दछन्। यसको बारेमा सोच्नुहोस् ... जब तपाईं आफ्नो परिवारलाई रेस्टुरेन्टमा लैजानुहुन्छ, तपाईं टेबलको लागि पिज्जा अर्डर गर्नुहुन्छ। जब तपाईं डेलिभरी अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईं ब्रेकफास्ट वा लेट राती खाजाको लागि पनि पर्याप्त अर्डर गर्नुहुन्छ!
व्यक्तिहरू अधिक र अधिक सुविधाको लागि खोजी गर्दैछन्। किराना स्टोरहरू बन्द भइरहेका छन् र रेस्टुरेन्ट चेनहरू बृद्धि भइरहेको छ। कारण सरल छ, हामी आफ्नो व्यस्त जीवनशैली र कम समय किनमेल र पाक कला दिएर परिवारसँग बढी गुणस्तरीय समय बिताउन चाहन्छौं। यदि तपाईं आफ्नो परिवारको लागि उत्तम खाना लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई घरको बाटोमा उठाउन सक्नुहुन्छ भने, किन !? बाहिर खानेकुरा भनेको हड्ताल हो ... तर आफ्नै घरको गोपनीयतामा खाना खुल्ला पार्नाले अझै पनि परिवारलाई टेबलको वरिपरि जम्मा गर्न अनुमति दिन्छ।
एक महान अनलाइन अर्डर प्रणालीले अर्डरिंग त्रुटिहरूलाई कम गर्दछ र कम कर्मचारी संसाधनहरू पनि लिन्छ! एक अर्डर गडबड गर्न गाह्रो - जब तपाईं एक सँगै राख्दै हुनुहुन्छ, हैन?
अझ धेरै काम बाँकी छ, यद्यपि। को POS प्रणाली अझै पुरानो पुरानो छ। औसत रेस्टुरेन्टमा हिंड्नुहोस् र तपाईं एक मजबूत POS विन्डोज running on running मा चल्दै हुनुहुन्छ र एक्सेस डाटाबेसको बाहिर काम गर्नुहुनेछ! अवश्य पनि, त्यहाँ एक राम्रो टच स्क्रिन छ ... तर गम्भीर खेलाडी भित्र आउन र घर सफा गर्नका लागि उद्योग पकाइसकेको छ।
अनलाइन आदेश प्रणाली फरक बनाउँछ। प्रयोग गर्दै एपीआई POS, फ्याक्स, र ईमेल एकीकरणको साथ - रिस्टोरर्सहरू उनीहरूले के गर्छन् राम्रो गर्न स्वतन्त्र छन् ... धेरै र ठूलो अर्डर थप्दा धेरै उत्तम खाना र सेवा बेच्नुहोस्! त्यहि ठाउँमा हामी आइपुगेका छौं। हामीले केहि महान अनुप्रयोगहरू पायौं जुन तपाईले विश्वास गर्नु पर्ने भयो। कम्पनी र उद्योग लिनको लागि पाक छन् र हामी सबै भन्दा राम्रो हुन जाँदैछौं!
यहाँ इण्डियानापोलिसमा हामी हाम्रो सफ्टवेयरको साथ कार्यान्वयन गर्दैछौं स्कॉटीको ब्रीहाउस.
कुनै स्कॉटीकोमा हिंड्नुहोस् र तपाईंले तुरून्तै याद गर्नुहुनेछ कि अनुभव सबै प्रयोगकर्ताको बारेमा हो र यसलाई टेक्नोलोजीसँग मिलाएर। तपाइँ कोल्ट फ्यानहरूको लागि, Scotty's मा प्रत्येक सीट फ्रन्ट सिट हो किनकि प्रत्येक बुथको आफ्नै LCD टेलिभिजन हुन्छ! निश्चित गर्नुहोस् कि उनीहरूलाई खाजाको लागि पनि जाँच्नुहोस् ... तिनीहरूसँग उत्कृष्ट $ menu मेनू छ!
तिनीहरूलाई निश्चित गर्नुहोस् कि डगबाट संरक्षक तपाईंलाई पठाएको!
तपाईंको लागि एउटा नंगे Barebones कम्प्यूटर कहानी ...
मैले केहि गुगल अनुप्रयोग सेटअप गरें तर ईमेलको लागि मात्र।
सुरु पृष्ठ चीज तपाईंले गर्नुभयो सफा देखिन्छ।
म त्यो प्रयास गर्न जाँदैछु
मई 28, 2012 मा 4: 23 PM
मैले एउटा नयाँ समाधान देखेको छु जुन Eat अनलाइन भनिन्छ जुन देखिन्छ
अरू भन्दा चाँडो र eaiser, के तपाईंले यो देख्नु भयो?